Handray ny “JO 2024” : hiady ny lalao famaranana i Paris sy i Los Angeles | NewsMada
Handray ny “JO 2024” : hiady ny lalao famaranana i Paris sy i Los Angeles
Henjana sy mitohy ny fifaninanana eo amin’i Paris sy i Los Angeles, amin’izay handray ny “Lalao olympika” (JO 2024). Ireo tanàna roa ireo no hanao ny lalao famaranana hatao any Lima, Pérou, ny 13 septambra 2017, fifidianana izay handray ny “JO 2024”.
Tsy amin’ny 13 septambra 2017 loatra ny tena “lalao famaranana”, raha ny filazan’ny mpanara-maso isan-tsokajiny, fa amin’ny 11 jolay ho avy izao, fanadinana am-bava, any Lausanne Suisse, hatao amin’ireo komity mpikarakara avy amin’ireo tanàna ireo. Samy manana ny mampatanjaka sy ny mampalemy azy ireo tanàna roa lehibe ireo, ary efa samy nandalovan’ny komity olympika (CIO) nizahana ny zava-misy any aminy avy.
Azo lazaina fa ny herin’i Los Angeles, efa nandray ny “JO 1984” izy, ary efa manana kianja sy fotodrafitrasa rehetra ho amin’izany; ny lafy ratsiny kosa, ratsy toerana i Etazonia noho ny politikan’ny filoha Donald Trump, misakana ireo mpifindra monina any aminy. Any Paris, indray, azo ambara fa efa vonona hatramin’ny 95 % ny kianja sy ny fotodrafitrasa any aminy, saingy ny olana, tsy azo antoka loatra ny fiantohana ny fandriampahalemana manoloana ny asa fampihorohoroana.
« Tsy tokony hijery ny 100 taona lasa fa ho an’ny 100 taona ho avy”, hoy ry zareo Amerikanina ; ny Frantsay kosa, miaro ny filatsahany ka nilaza, ohatra, ny ben’ny Tanànan’i Paris, Rtoa Anne Hidalgo, fa “manohana ny CIO amin’ny fomba fanendrena tanàna izay handray ny Lalao olympika”, taorian’ny fihaonany tamin’ny filohan’ny CIO, Thomas Bach, teratany alemana.
Maro ny manohana an’i Paris
Maro ny manohana an’i Paris, eo ny faha-100 taonan’ny “JO 1924”, fa eo koa ireo milaza ny filatsahan’i Frantsa faninefatra izao. Tena hevi-dehibe naroson’ireo lohandohany any Frantsa ny hoe tanàna mendrika sy tsara afaka handray izany lalao izany ry zareo. Mamaly ny Amerikanina, amin’ny alalan’i Allyson Felix, atleta malaza any aminy, fa “tsy tokony ho mahina amin’i Etazonia izao tontolo izao noho ny fahasamihafana isan-karazany misy aty aminay. Hery lehibe ho anay izany », hoy izy.
Manoloana ny tanjaky ny Amerikanina, mampahalala ny heriny koa ny Frantsay amin’ireo toerana malaza sy manan-tantara any aminy : Champs de Mars, les Invalides, le Grand Palais, sns, hahafahan’ny mpilalao sy mpijery miaina tsara ny “JO 2024”. Amin’ny 13 septambra 2017 izany ny fotoana any Lima, Pérou.